China News Industry Factory - Cheap Industry News Supplier, mpanondrana - Part 2
Ny US Hoverboard afo nahatonga ny fahafatesana sy ny iray roa naratra
Post fotoana: 03-15-2017
Araka ny haino aman-jery Amerikana dia nitatitra tamin'ny 11 Martsa 2017, tao Harrisburg tanàna hoverboard afo fipoahana zava-nitranga nahatonga ny fahafatesan'ny zaza, tovovavy roa no naratra, ankoatra ny mpamono afo iray no naratra. Araka ny mpamono afo voalaza amin'ny 8 ora alina, mba ho afa-mandositra, iray amin'ireo niharam-boina avy amin'ny ...Lire la suite »
Electric Hoverboard mahatonga ny fiainana tsotsotra kokoa & malalaka
Post fotoana: 03-07-2017
Amin'izao fotoana izao, fanatanjahan-tena dia lasa ny toerana tena asa ho birao gens, fotsy-vozon'akanjoko mpiasa ao amin'ny birao, tamin'ny andro ny solosaina, samy momba ny tena dia tsy fisian'ny fanatanjahan-tena, indrindra fa mora samihafa madinika olana eo amin'ny lafiny maro momba ny tena, mafy toy ny tendany, totozy tanana sy maso maina, ther ...Lire la suite »
Ny fifandraisana misy eo Ul 2272 Certification & Hoverboard
Post fotoana: 02-07-2017
Hoverboard antsoina koa hoe tena mahay mampifandanja môtô, noho ny teo aloha ny taona 'hoverboard afo zava-nitranga, ny US Consumer Product Safety Association (CPSC) dia nanambara fa tena mahay mampifandanja rehetra scooter na Hoverboard mpamokatra, mpanafatra sy mpizara ny counterbalanced fiara dia tsy maintsy manaraka ny .. .Lire la suite »
Ny tombony ny nitaingina ny hoverboard
Post fotoana: 12-26-2016
Hoverboards be mpitia amin'izao andro izao, ary izany dia lasa fironana ho an'ny ankizy, tanora sy ny aults mba haka fohy dia niaraka tamin'ny mahatahotra hoverboard.If fifandanjana tena te-hividy ny tanana hoverboard maimaim-poana ho an'ny ankizy, namana, na ny tenanao, dia afaka mahazo maro FIKAROHANANA avy amin'ny aterineto ny amin'ny 2 kodia ...Lire la suite »
Nahoana no ny herinaratra na ny skateboard scooter ka nandray an-tsena?
Post fotoana: 12-14-2016
Ampidiro ny taom-baovao, ny herinaratra mandanjalanja fifaninanana scooter saha dia lasa mitombo masiaka. Major mpanamboatra no nanomboka ny vokatra vaovao, foana ny manamafy orina sy hanitatra ny hery mitarika sy ny satany eo amin'ny mpanjifa. Ny mpanoratra dia nihevitra foana fa iray amin'ireo mpiara manan-danja indrindra ...Lire la suite »
Nahoana no ny mizana scooter ho fotsy ny asan'ny-vozon'akanjoko artifact?
Post fotoana: 11-22-2016
Rehefa mandeha ny asa, inona no matahotra indrindra? Mino aho fa ny ankamaroan'ny olona dia milaza fa tara izy ireo, raha tsy voakasiky ny fitsaboana feno habibiana teny an-dalana hiasa. Ny ankamaroan'ny olona mandeha miasa amin'ny alalan'ny fiara fitateram-bahoaka metro mitaingina, mazava ho azy, dia afaka misafidy ny handeha izy. Ary ny teo anelanelan'ny telo amin'izy ireo manana ny disadv ...Lire la suite »
Fantatrao ve ireo toro-hevitra mahasoa ho an'ny mahay mampifandanja scooter foana?
Firy no ahafantaranao fa mahay mampifandanja scooter foana toro-hevitra? Androany aoka Koowheel Editor mampiditra ho anao. Ny fikojakojana ny mampifandanja ny fomba ho an'ny Scooter na hoverboard: 1. Ny fampiasana ny Koowheel mahay mampifandanja scooter tsy hisaraka amin'ny andraikitry ny kodiarana, ka tokony hanao tsara ny inspecti ...Lire la suite »